Xeedho Ac/DC - Shiinaha Charger Ac/DC -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha
CAW-ku-dhejiyaha AC-ku-dhejisan ee AC wuxuu ka kooban yahay unug kontarool oo weyn, is-dhexgalka aadanaha-kombiyuutarka, is-dhexgalka lacag-bixinta, cabbiraadda iyo halbeegga lacag-bixinta. Waxay u adkaysanaysaa gariirka waxayna leedahay hawlo ilaalin oo dhammaystiran, fasalka ilaalintu waa IP54, kaas oo daboolaya aag yar, la kulma rakibidda iyo adeegsiga bay'adaha gudaha iyo dibaddaba, oo wuxuu siiyaa awoodda AC baabuurta korontada leh ee xeedho saaran.
CSI 60K500/750-EUJCabc mashiinka batteriga ee AC/DC ee mashiinnada ku dallaca baabuurta
Qaybta taxanaha CSI-nooca caqliga leh ee AC/DC xeedho deg-deg ah ayaa siisa is-dhexgalka aadanaha-kombiyuutarka ku habboon, qaab-dhismeedkiisu wuxuu fududeeyaa dayactirka qalabka iyo ballaarinta; Naqshadeynta saddex-interface waxay xaqiijineysaa soo-saarka awoodda AC 43kw iyo DC 60kw isku mar.
CSP 15/30K-E nidaamka ku-dallacidda taxanaha AC/DC
CSP 15/30K-E taxane nooca la dhaqaajin karo oo caqli badan xeedho degdeg ah DC waxay u adkaysanaysaa gariirka waxayna leedahay hawlo ilaalin oo dhammaystiran, oo ku habboon saldhigyada baska lagu shubto, meelaha baabuurta la dhigto, dukaamada dayactirka baabuurta, soo saarayaasha baabuurta iyo meelaha kale ee ay macaamiishu si degdeg ah uga jawaabi karaan una tijaabin karaan tamar dheeraad ah .
CSP 15/30K500J nidaamka qaadista DC/AC ee la qaadan karo
CSP 15/30K500-J nooca dhaqaaqa ah ee caqliga leh ee xeedho degdeg ah DC wuxuu u adkaysan karaa gariir wuxuuna leeyahay hawlo ilaalin oo dhammaystiran, oo ku habboon saldhigyada baska lagu shubto, meelaha baabuurta la dhigto, dukaamada dayactirka baabuurta, soo saarayaasha baabuurta iyo meelaha kale ee ay macaamiishu si degdeg ah uga jawaabi karaan una tijaabin karaan tamar dheeraad ah.
CSW 15/30K-E si toos ah nidaamka lacag-bixinta ee baabuurta korontada
CSW 15/30K-E taxane nooca darbiga ku dhegan oo caqli badan DC xeedho degdeg ah ayaa leh hawlo ilaalin oo dhammaystiran, Way ku habboon tahay jawiga rakibaadda yar -yar ee gudaha, oo ku habboon dadka isticmaala inay si dhakhso ah lacag uga qaadaan.
Nooca taxanaha ah ee CSW ee darbiga ku rakiban garaadka degdegga ah ee DC wuxuu leeyahay shaqooyin ilaalin oo dhammaystiran, Waxay ku habboon tahay bay'ada rakibaadda yar ee gudaha, waxayna u habboon tahay adeegsadayaasha inay si dhakhso ah u dallacaan.
JFY ECM/ECH (laba jibbaaran) 15KW Wax-ku-oolnimada Sare Caqli-yaqaanka korantada korantada
Suurtagalnimada:> Soo-galinta korantada oo ballaaran ；> Baaxad ballaadhan oo soo-saarka korantada DC ah, oo lagu dabaqi karo barafka yaryar, basaska yar yar iyo tababarayaasha; > Awood u leh inuu soo dejiyo in ka badan 20 qaybood oo isbarbar socda; > Waxaa lagu dabaqi karaa tuulmooyin isku -dhafan oo isku -dhafan, tuubbooyin kala -qaadasho kala -jaad ah, tuubbooyin lacag -qaas ah oo qaali ah, xerooyin la qaadi karo oo la qaadi karo iyo kuwa wax lagu shubto iwm. Wax -ku -oolnimo sare:> Koronto kala duwan oo ballaaran oo leh awood buuxda; > Qaadashada farsamada wadaagga tooska ah ee dhijitaalka ah oo leh saxnaan sare oo curren ah ...